Taalibaan: Ajaanib kaliya ayaa ka tagi kara Afgaanistaan ​​gegida diyaaradaha ee Kabul
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Taalibaan: Ajaanib kaliya ayaa ka tagi kara Afgaanistaan ​​gegida diyaaradaha ee Kabul
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Afhayeenka Taliban Zabiullah Mujahid
Talibanka ayaa dalbanaya in quwadaha reer galbeedku ay ka fogaadaan daad -gureynta dadka aqoonta leh ee Afghanistan, sida dhakhaatiirta iyo injineerada.
Taalibaan uma oggolaan doonto dadka reer Afgaanistaan ​​inay ka baxaan garoonka diyaaradaha ee Kabul.
Taliban ayaa ka niyad jabisay dadka reer Afghanistan inay ka cararaan dalka.
Daalibaan ayaa sheegtay in dhammaan ajaanibta ay tahay inay ka baxaan Afqaanistaan ​​ugu dambeyn 31ka Ogosto.
Afhayeenka Daalibaan Zabiullah Mujahid ayaa maanta ku dhawaaqay in kooxda xagjirka ah ee Islaamiyiinta aysan mar dambe u oggolaan doonin dadka reer Afgaanistaan ​​inay galaan garoonka caalamiga ah ee Kabul Hamid Karzai iyagoo isku dayaya inay ka baxaan Afghanistan.
Isagoo hadlayay galabnimadii Talaadada, afhayeenka Taalibaan wuxuu sheegay in Taliban aysan mar dambe u oggolaan doonin dadka reer Afgaanistaan ​​inay waddanka isaga baxaan Madaarka Kabul waxayna ugu baaqeen reer galbeedka inaysan ku dhiirrigelin dadka waxbartay inay cararaan. Afhayeenku wuxuu dalbaday in quwadaha reer galbeedku ay ka fogaadaan daad -gureynta dadka aqoonta leh ee Afghanistan, sida dhakhaatiirta iyo injineerada.
Mujaahid wuxuu sheegay in hoggaamiyeyaasha Daalibaan aysan raalli ka ahayn inay u oggolaadaan dadka reer Afgaanistaan ​​inay baxaan, laakiin wuxuu ku celceliyay in dhammaan ajaanibta laga daadgureeyo Afghanistan marka la gaaro Ogosto 31 waxayna sii wadi kartaa adeegsiga Garoonka Caalamiga ah ee Hamid Karzai ilaa waqtiga kama dambaysta ah.
Mujaahid ayaa sidoo kale sabab uga dhigay in dadka reer Afgaanistaan ​​ay ka fogaadaan xaaladda qasan ee garoonka. Wuxuu sheegay in dadka ku xeeran garoonka diyaaradaha ee caasimadda ay tahay inay guryahooda ku noqdaan, isagoo ku andacoonaya in amnigooda la damaanad qaadi doono.
Isla war -saxaafadeedkan, Mujaahid wuxuu ku andacooday in dadku ku nagaan karaan Afgaanistaan ​​wuxuuna ballanqaaday inaysan jiri doonin aargoosi. Waxa uu sheegay in Daalibaan ay iska iloobeen khilaaf horay u jiray ayna u oggolaan doonaan in la dhaafo.
Wuxuu sidoo kale xaqiijiyay in Taliban aysan oggolaan in la kordhiyo waqtiga 31 -ka Ogosto oo Mareykanku u qabtay si ay u dhammaystiraan daadgureynta Afghanistan.